Mpikaroka mahita biby fiompy vaovao aretina sy manakana azy tsy hiparitaka - China Chongqing Fangtong
Mpikaroka mahita omby aretina vaovao, ary manakana azy tsy hiparitaka
Taorian'ny fandinihana ny fototarazo sembana zanak'omby izy, ny fikarohana dia afaka manokatra ny teo aloha aretina tsy fantatra hita ao Holstein omby. Ny fanatodizan'ny vantotr'ombilahy izay ny mutation, ka ny deformation avy izao natao nidina ho any hisorohana ny aretina tsy hiparitaka bebe kokoa.
Ao anatin'ny Danoà omby FIOMPIANA ny tsirinainy ny fanatodizan'ny omby iray no ampiasaina mba inseminate omby vavy be dia be. Noho ny maro inseminations omby iray afaka izao no ray an'arivony-janak'omby. Noho izany dia tena zava-dehibe ny hamantarana raha omby fanatodizan'ny mitondra aretina manaranaka.
Izany indrindra no mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i Copenhague vao nanao. Ao amin'ny fianarana eo Holstein zanak'omby nivoaka tao amin'ny gazety ara-tsiansa BMC fototarazo izy ireo nahita mandraka ankehitriny tsahona aretina amin'ny biby - ny endrika deformation tahaka ny nifidianan'ireny hiantso endrika Dysplasia Syndrome. Ny mpikaroka dia nahita ny fiovan'ny fototarazo * izany no mahatonga ny aretina eo amin'ny ombilahy kely, ary niverina mba voaresaka manokana piompiana omby iray. Ary ny vantotr'ombilahy natao ankehitriny nidina ho any hisorohana ny toe-javatra bebe kokoa ny aretina eo ombilahy kely vao teraka.
'Izahay nahita fa iray fanatodizan'ny omby efa nanjary mutation ao amin'ny sela ny tsirinain'ilay ombilahy-mamokatra sela, izay nitarika ho amin'ny deformation eo amin'ny ombilahy kely. Ny omby nandalo ny mutation eo ny 0,5 isan-jaton'ny ny taranany, izay tsy haneno toy ny be. Fa izao dia efa niteraka omby maherin'ny 2.000 janak'omby sy mety afaka ho tonga ray kokoa. Rehetra ny sampona maty zanak'omby, na voatery ho ringana, satria nijaly izy ireo. Noho izany, zava-dehibe ny hahita ny antony ", hoy ny Profesora Jørgen Agerholm avy ao amin'ny Sampan-draharahan'ny ny Veterinary Clinical Sciences.
Rehefa avy vaovao avy amin'ny mpitsabo biby-janak'omby amin'ny endrika deformations, Jørgen Agerholm dia nitady tranga bebe kokoa ao amin'ny tambajotra dia omby mpitsabo biby, anisan'izany ny tao amin'ny Facebook. Avy eo izy dia nahazo bebe kokoa noho ny fandinihana zanak'omby.
ADN avy amin'ny zanak'omby sampona dia nampanekena ho fototarazo fampianarana, ary eto ny mpikaroka iza ny ankapobeny ampahany amin'ny genome izay nitahiry ny mutation tsy ara-dalàna hita ao amin'ny ADN Holstein. Izany dia azo atao noho ny lalina ara-dalàna teo aloha Holstein mappings ny ADN.
Ny mpikaroka dia nianatra fa mitovy endrika deformations dia hita ao ny olona, ​​ary izany no vokatry ny fiovan'ny fototarazony ao amin 'ny faritry ny genome, mazava kokoa ny fototarazo eo FGFR2 vaovao-teraka zazakely. Gene sequenced ity dia ao amin'ny ombilahy kely 'genome, sy ny mpikaroka dia avy eo afaka mamaritra fa ny mutation amin'ny fototarazo io no nahatonga ny aretina eo amin'ny ombilahy kely. Ny olona toy izany no nanampy aretina ny mpikaroka ao amin'ny dingan'ny famantarana ny Gene mutation.
Ny mpikaroka ihany koa ny ADN avy nandinika ny ombilahy kely 'ray aman-dreniny sy ny iray tam-po, ary fantany fa ny mutation anjakan'ny eto ihany koa. Midika izany fa ny ombilahy kely, rehefa lasa ny deformation ny mutation dia nandroso hatrany na ny reny na ray, fa tsy avy tamin'ny reniny sy ny rainy, dia ny tranga maro aretina manaranaka.
'Ny tanjona foana mba hampidina ny isan'ny marary sy ny maty zanak'omby izy, toy ny sasany izay nolovaina aretina dia tena mafy sy invalidating. Amin'ity tranga ity ny maso nihantona nidina avy ny lohan 'ny zanak'omby izy, dia ny endrika deformations nahatonga azy ireo hanana olana fifohana rivotra mafy. Tsy sarotra ny sary an-tsaina ny fanaintainana no nahatonga izany. Research vokatra toy izany dia mampitombo ny biby fifanampiana amin'ny alalan'ny famerana ny fihanaky ny aretina izany. Ary mazava ho azy izany ihany koa ny ara-bola Manatsara ny toe-draharaha ny biby fiompy tompony, izay afaka manamaivana fatiantoka ', dia manazava Jørgen Agerholm, izay ihany koa Lohan'ny ny Section ho Veterinary fananahana sy ny fiterahana.